संगीत उत्पादक समाज बैधानिक । सुवास रेग्मीको आरोप निराधार – Namaste Filmy
संगीत उत्पादक समाज बैधानिक । सुवास रेग्मीको आरोप निराधार
अहिले संगीत बजारमा एउटा विवादले निकै चर्चा पाइरहेको छ । विवादको कारण हो संगीत उत्पादक समाजको अघिल्लो साता सम्पन्न निर्वाचन । निर्वाचनबाट निर्मल ढकालको अध्यक्षतामा सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चुनिएको थियो ।
तर सो निर्वाचनमा धाँधली भएको, अनाधिकृत रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएको र नवनिर्वाचित कार्यसमित गैर कानुनी रहेको भन्दै बिन्दाबासिनी म्युजिक प्रालिका सञ्चालक रहेका सुवास रेग्मीले आरोप लगाए । जो अध्यक्ष पदका लागि संगीत उत्पादक समाजको निर्वाचनको चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए । उनी निर्मल ढकालसँग हारेका अध्यक्षका उम्मेदवार हुन । त्यसैले उनको आरोपलाई हारको आक्रोशको रुपमा नवनिर्वाचित कार्यसमितिले सहज रुपमै लिन खोजे ।
तर रेग्मी शान्त रहन खोजेनन्, उनले निर्वाचनमा बिजयी उम्मेदवारहरुको विभिन्न कमजोरी खोज्न थाले र त्यसलाई हतियार बनाएर संगीत उत्पादक समाजमाथि प्रहार गरे । यतिसम्म कि उनले समाजको विभिन्न पदमा बिजयी पदाधिकारीको कम्पनीले कर चुक्ता नगरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमै बिरोध गरे । उनले समाजको निर्वाचित अध्यक्ष निर्मल ढकाल, सचिव परशुराम रिजाल र कोषाध्यक्ष कल्पना पौडेलसहित र्दुइजना सदस्यको म्युजिक कम्पनीले कर नतिरेको भन्दै खुट्टा तान्ने प्रयास गरे । उनले कम्पनी रजिस्टारको कार्यलयलाई समेत तोकेर विभिन्न आरोप लगाउदै दाबीहरु प्रस्तुत गरे । उनका यी गलत आरोप र आक्षेपलाई केहि अनलाइन मिडियाले समेत प्रकाशन गरेपछि संगीत उ्रत्पदाक समाज यसबारेमा मौन रहन सकेन र कानुनी रुपमा अघि बढ्ने भएको छ । समाजले आफ्नो मान मर्यदामा आँच आउने खालका अभिब्यक्ति दिएको र गतिविधि गरेको भन्दै रेग्मी बिरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने बताइएको छ ।
उत्पादक समाज बैधानिक
संगीत उत्पादक समाज रेग्मीले भनेजस्तो अवैधानिक र गैर कानुनी निर्वाचनबाट चुनिएको नभई पुणै बैधानिक रहेको समाजका अध्यक्ष निर्मल ढकालले बताए । आफुहरु पुर्ण रुपमा अनुशाशित भएर निर्वाचनमा सहभागि भएको र र ससम्मान बिजयी भएकाले कसैले औला उठाउदैमा नझुक्ने उनको भनाई छ । सुवास रेग्मीले दिएको अभिब्यक्तिलाई आफुले जित्न नपाएको रीसमा डाह र आडम्बरले जे मन लाग्यो त्यहि बौल्दै हिडेको ढकालको बुझाई छ । उनी भन्छन यो उनको हारको रीस हो । हाम्रा कमजोरी कसरी र कहाँबाट पाउन सकिन्छ भन्दै अहिले गहिरो षड्यन्त्र भइरहेको छ । तर हामी पछि हट्नेवाला छैनौ । उनले निर्वाचनको सम्पुर्ण प्रक्रिया निष्पक्ष भएको र सोको भिडियोसहितको प्रमाण आफुहरुसँग सुरक्षित रहेको बताए ।
निर्वाचित सचिव परशुराम रिजालले आफुहरुले नियमित रुपमा कर तिर्दै आएको बताए । रेग्मीले भनेजस्तो कर नतिरी सरकारलाई छलेको भए प्रमाण देखाउन उनले चुनौति दिए । आफुहरुले नियमित कर तिरेको प्रमाण आफुहरुसँग सुरक्षित रहेको र रेग्मीले अनावश्यक लाञ्छना लगाउदैमा आफुहरुले घुडा नटेक्ने उनको तर्क थियो । रेग्मीको कपोल्कल्पित आरोप र एकोहोरो आक्रोशलाई केहि मिडियाले प्रकाशन गरेकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए । सत्यतथ्य नबुझी मिडियाको साथीहरुले साथ दिनुहुन्थेन, यो त रेग्मीको बकपत्र जस्तो भयो ः उनले भने ।
रेग्मीको आरोप निराधार
रेग्मीले लगाएको निर्वाचनमा धाँधली भएको र विजयी उम्मेदवारहरु योग्य नभएको भन्ने आरोप सरासर झुठ र गलत रहेको समाजका अध्यक्ष ढकाल बताउछन । उनी भन्छन : रेग्मीलाई उम्मेदवार अयोग्य लागेको भए निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले किन बोलेनन् । निर्वाचन हुदा केहि गुटको भरमा जित्छु भन्ने बिश्वास थियो तर हारेपछि अनावश्यक बखेडा झिक्ने ? : आक्रोशित हुदै ढकालले भने । भोट हाल्नु अघि नै रेग्मीबाट यस्ता कुराहरु आएको भए हामी बिचार गथ्र्यौ, सत्य तथ्य पत्ता लगाउथ्यौ: उनी भन्छन : ‘जब भोट गणना हुदा आफु र आफ्नो प्यानल हार्यो अनि नानाथरि आरोप लगाउदै संस्थाकै आलोचना गर्दै हिड्नु जायज होइन ।’
आफुले लज्जास्पद हार ब्यहोरेपछि अनलाइन मिडियासमक्ष रुदै हिडेको र संगीत क्षेत्रका अग्रज ब्यक्तिहरुलाईसमेत गाली गलौज गर्दै हिडेकाले पनि रेग्मी कतिसम्म जिम्मेवारहिन ब्यक्त रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको सचिव रिजाल बताउछन ।
रेग्मी आफै नैतिक पतन भएको ब्यक्ति
अहिले संगीत उत््रपादक समाजलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाएर बेइज्जत गर्ने कोसिस गरिरहेका रेग्मी आफै संगीत क्षेत्रमा निकै आलोचित र नैतिक पतन भएका ब्यक्ति हुन । उनलाई केहि बर्षअघि संगीत उद्योग संघले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरि कारबाहि गरेको थियो ।
यसरी नैतिक पतन हुनै फौजदारी अभियोगमा समेत मुछिएका रेग्मीले अहिले संगीत उत्पादक समाजको बदनाम गराउने कोशिस गरिरहेको सचिव रिजालले बताए । समाजका अध्यक्ष ढकालले संगीत उद्योग संघले बहिष्कार गरेको ब्यक्तिलाई आफुहरुले आफ्नो ठान्नु नै आफुहरुले गरेको ठुलो गल्ति भएको बताए । आफुहरुले रेग्मिलाई अध्यक्षमा उम्मेदवार बन्न दिनु सबैभन्दा ठुलो भुल भएको बताउदै उनले भने : यस्तो नैतिकताहिन मान्छे उत्पादक समाजको अध्यक्ष भएको भए के हुन्थ्यो ? समाजको इज्जत कहाँ पुर्याउथ्यो ?
अन्तत रेग्मीद्धरा हार स्वीकार
अन्तत निर्वाचनमा पराजित सुवास रेग्मीले आफ्नो हार स्वीकार गरेका छन । केहि दिन लगातार बिरोध समाआलोचना गरेका उनले फेसबुकमा हार स्वीकारर्दै विजयीलाई बधाई दिएका छन । समाजका निर्वाचित ण्सचिव परशुराम रिजालले केहि मिडियामा र संघसंस्थामा हार गुहार गरेका रेग्मी अन्त आफ्नो हार निश्चित भएपछि पछि हटेको बताए ।
संगीत उत्पादक समाजको अघिल्लो शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनबाट अध्यक्षमा निर्मल राज ढकाल, उपाध्यक्षमा सूर्य बहादुर मगर, महासचिवमा लक्ष्मण हुमागाई, सचिवमा पर्शुराम रिजाल, कोषाध्यक्षमा कल्पना पौडेल, र८सदण्रस्यहरुमा हुम गैरे, शुक्रराज लिम्बु, खगेन्द्र कुमार लिम्बु र सुनिल लामिछाने विजयी भएका थिए ।
मेलोडि गीतमा पनि पर्फेक्ट टंक । 'च्याम्पियन' गीत रिलिज
'हेट स्टोरी ३' लाई ४ दिनमा ३१ करोड